Mividiana fanafody mony ary mankafy hoditra mazava tsara aorian'izay! Mihena hatramin'ny 50%!
Hitantsika 1 vokatra azo omena anao
Inona ny mony?
refin- dia aretin-koditra mahazatra izay manome fahantrana ara-tsaina lehibe. Ireo mararin'ny mony sy ireo mijaly amin'ny toe-javatra iantsoan'ny dermatologists RETENTION KERATOSIS, manana hantsana sebaceous mavitrika izay mahatonga ny hoditra hidona amin'ny sela maty eny ambonin'ny tany ary izany dia miteraka fiompiana bakteria.
Ny sela maty dia mivoaka hatrany amin'ny épérermis. Indraindray, ary indrindra amin'ny hoditra misy menaka, ireo sela ireo dia tsy potipotika ary afaka mitraka, miverina any am-baravaran'ny lavadavaka, ary vokatr'izany dia voasakana ny mason-koditra.
Ny rivotra madio dia tsy afaka midina ao anaty folikel mba hanatitra oksizenina manapoizina. Ny vokatr'izany dia ny mason-koditra voafetaka miaraka amin'ny tontolo mafana mando. Io no toerana fiompiana bakteria tonga lafatra. Rehefa miangona sy mihabetsaka ny bakteria, dia mivonto ao anaty fototra izy io ary miteraka fivontosana. Ny loha fotsy sy ny mainty dia samy manomboka amin'ny "microfollowone". Ireo dia lasa loha fotsy na mainty na farany pustule.
Izy io dia mifandraika amin'ny tranga pathogenika izay tokony horesahina mba hamolavolana drafitra fitsaboana ny aretina. Ianao dia hitsabo ny fivontosana, ny fielezan'ny hyperactive, ny sebum be loatra ary P acnes. Miankina amin'ny habetsaky ny aretina amin'ny karazana fitsaboana ilainao izany. Amin'ny tranga sasany dia mila ampiasaina antibiotika loha-loha na rafitra ary raha ilaina ny benzoyl peroxide hampihenana ny fisian'ny fanoherana.
Na dia sarotra aza ny miatrika izany dia ilaina ny mahafantatra fa tsy irery ianao. Ny fitsaboana mony dia toa toa lavitra ny kilometatra, fa ny dia rehetra dia misy fiandohany. Azo takarina fa sarotra ny manam-paharetana rehefa voasoratra manerana ny tavanao ny olanao. Na izany aza, mandreraka sy mandany fotoana toa izao, ny hoditrao dia hahita ny androny tsara indrindra raha maharitra amin'ny lalanao mankany amin'ny endrika mazava ianao.
Iza no mahazo mony?
Ny olona amin'ny firazanana sy taona rehetra dia mahazo io aretin-koditra manelingelina io. Mateti-pitranga eo amin'ny tanora sy ny olon-dehibe izany. Tombanana ho 80 isanjaton'ny olona rehetra eo anelanelan'ny 11 sy 30 taona no voan'ny mony amin'ny fotoana iray.
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​dia mazàna ny mandeha amin'ny fotoana mahatratra ny telopolo taonany; na izany aza, ny olona sasany ao amin'ny efa-polo sy dimam-polo taonany dia mbola manana an'io olana amin'ny hoditra io.
Ity aretin-koditra ity dia misy endrika samihafa ary mazàna no hamantarana ny habeny sy ny hamafiny ary mampijaly ny olona amin'ny taona rehetra. Matetika, endrika mavesatra mivoatra amin'ny endrika malemy kokoa; raha ny hafa kosa mety hivoatra tsy miankina.
Ireo endrika rehefa voan'ny tsentsina sebum (menaka voajanahary vokarin'ny hoditra) ny volo volo (pore) amin'ny hoditra, sela maty ary voan'ny bakteria. Izany dia mitarika fivontosana (fivontosana, mena ary mangirifiry) eo amin'ny aretina.
Ny fiandohan'io dia ny lesion kely indrindra, antsoina hoe microcomedo. Miankina amin'ny firoboroboan'ity microcomedo ity dia mety hivoatra amin'ny comedo misokatra na comedo mikatona.
Alohan'ny ahafahanao manandrana manala ireo pimples misy ireo fitsaboana mony isan-karazany misy, dia tokony ho fantatrao ny karazana mony atrehinao. Ity misy topy topy momba ireo karazana isan-karazany:
Vulgaris mony - ity no endrika mahazatra indrindra, izay misy blackhead (open comedo) sy whitehead (comedo mikatona). Io endrika mony io no mony miavaka indrindra manasitrana ny mony
Blackheads - Mivoatra ny mainty rehefa sakanan'ny sombin-koditra ny sela maty, bakteria ary sebum. Ny loko mainty an'ity pimple ity dia tsy vokatry ny loto, fa miorina rehefa mihetsika amin'ny oxygène amin'ny rivotra ireo pigmentur miharihary. Blackheads dia mety ho sarotra ny mitsabo.
Whiteheads - Whiteheads dia vokatry ny mason-koditra voasakana tanteraka. Ny pore dia mameno bakteria, menaka ary sela maty, ary io fangaro io dia toa fotsy eo ambanin'ny hoditra ihany. Whiteheads dia mazàna tsaboina kokoa noho ny mainty.
Papules - Papules dia nosakanana ny mason-koditra voan'ny virus sy voaditra. Mipoitra toy ny vongan-doko mena amin'ny tampon'ny hoditra izy ireo. Ireo pimples ireo dia tsy tokony ho voahidy mihitsy, satria hanaparitaka ny aretina amin'ny faritra manodidina izany, hanakana ny fanasitranana ary hitarika fivontosana.
Pustules - Ny pustules dia toy ny loha fotsy, afa-tsy ireo pimples ireo dia mirehitra, mena ny fisehony ary misy foibe fotsy na mavo noho ny pus. Ny ankamaroan'ny antsoina hoe pimples na zits dia matetika pustules.
vongana - Ny node, na kista, dia endrika mony matevina izay feno pus, toy ny sac ao ambanin'ny hoditry ny hoditra. Elaela vao esorina ity karazana mony ity. Ny nodules dia tsy tokony ho voaporitra mihitsy. Ny famafana dia hanaparitaka ny aretina amin'ny sela hafa manodidina ny toerana misy ny aretina voalohany ary hanasarotra ny fanasitranana. Ny nodona dia tena maharary ary ny fery dia mahazatra ary ratsy lavitra noho ireo ateraky ny endrika hafa.
Hazo mivalona - Ny mony cystika dia iray amin'ireo endrika marary mafy indrindra. Matetika ny endrika kista dia mipoitra noho ny fametahana mony kely feno pus. Izany dia mahatonga ny volo handehandeha lalina mankamin'ny hoditry ny hoditra. Ireo vodin-tsofina malefaka feno nono feno hoditra dia lehibe, maharary ary sarotra tsaboina. Ny mony cystika dia mety hisy fiatraikany amin'ny tarehy sy amin'ny faritra hafa amin'ny vatana.
Jerona Rosacea - Ny mony Rosacea, na ny tena marina antsoina hoe rosacea, dia aretina mitaiza amin'ny hoditra toa vay mena. Misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny olon-dehibe antonony manana hoditra madio izany. Matetika ny mony dia miaraka amin'ny maimaika, izay mazàna voafetra amin'ny handrina, takolaka, orona ary saokany. Ny antony mahatonga ny rosacea dia tsy fantatra, fa ny fototarazo dia mety ho antony iray mahatonga izany. Ny rosacea mafy sy tsy voatsabo dia mety hiteraka fery manimba.
Ny mony Conglobata - Ny mony Conglobata dia endrika mony mahery amin'ny kista, amin'ny ankapobeny dia misy fiatraikany amin'ny lahy eo anelanelan'ny 18 sy 30 taona. Io endrika io dia miavaka amin'ny nodule mamaivay lalina izay mampifandray eo ambanin'ny hoditra amin'ireo nodule hafa, miaraka amina blackhead lehibe. Ireo pimples ireo dia mety haharitra an-taonany maro ary hiteraka fery mafy, ary sarotra tsaboina.
Ny mony kely dia mazàna mandray andraikitra amin'ny fitsaboana any an-trano, fa raha manana endrika matotra ianao dia tokony manatona mpitsabo aretin-koditra na mpitsabo matihanina hanampy anao handray fanapahan-kevitra momba ny fitsaboana tsara indrindra ho an'ny karazanyo.
Ity toe-batana ity dia mety hanimba hoditra tsara tarehy sy mahasalama amin'ny lafiny lehibe indrindra, indrindra rehefa avela handroso.
Pimples sy teboka maromaro no mety hitranga amin'ny fotoana iray na vitsivitsy monja, ary arakaraka ireo dia azo isaina ho toy ny
- Grade 1 - izay mazàna mahatafiditra komandy
- Grade 2 - misy ny loha fotsy indrindra, fa ny mainty kosa mety miaraka aminy
- Grade 3 - pus feno savony toy ny mony
- Grade 4 - Izy io dia heverina ho karazan'aretina mahery vaika indrindra misy fehin-kibo kely nefa feno pus izay feno mavesatra sy maharary.
Matetika no tsikaritra izany mandritra ny fahatanorana, miseho manodidina ny handriny matetika, ary indraindray koa eo amin'ny orona. Ny loha fotsy kely dia mety homarihina koa manodidina ny faritra misy saokany indraindray. Na izany aza, ny olon-dehibe koa dia nahatsikaritra fivoarana tampoka endrika malefaka amin'ny fiainany.
Ny famantarana voalohany amin'ny fanakorontanana amin'ny hoditra mitarika amin'ny fivoaran'ny mony dia ho hita, toy ny hoditra miendrika menaka manitra, komandy misokatra, matetika dia maro amin'izy ireo no miseho miaraka. Tsy misy ny fivontosan'ny hoditra hita matetika amin'ity dingana ity, na izany aza.
Ny mony kely na kilasy 1 dia eo amin'ny dingana somary mora tsaboina. Ireo mpiasan-doha topy eny amin'ny latabatra sy ny fahadiovana tsara dia ampy mba hifehezana ny fepetra. Mety haharitra iray volana eo ho eo vao hahamarika izay fanatsarana ny toe-javatra, fa rehefa manomboka ny fitsaboana kosa dia hanakana ny fivoaran'ny mony.
Ny mony antonony
Araka ny soso-kevitr'io, io dia ho somary manana laharana ambony kokoa noho ny mony malefaka. Ireo komandy sy loha fotsy mazàna dia hiparitaka kokoa fa tsy voafetra amin'ny faritra kely iray. Ireo teboka dia hanana habe somary lehibe kokoa noho ny fananganana pus, ary ny fivontosana malemy ihany koa dia azo marihina amin'ity dingana ity. Amin'ny vehivavy, ny fihenan-tsasatra matetika dia mifanaraka amin'ny tsingerim-bolana, na alohan'ny fadimbolana na mandritra ny fadimbolana.
Ny mony antonony na kilasy 2 dia mazàna mitaky fitambaran'ny asidra salisilika sy menaka perozide benzoyl hamono ny bakteria ary hanary ny tampon'ny hoditra, arakaraky ny sosona, mba hialana amin'ireo mony. Fahadiovana tsara indray, toy ny fanasana tsy tapaka ny faritra hanalana sebum be loatra, ary ny fanalavirana ny fakana na fanilihana ireo comedone matetika dia tsy maintsy harahina.
Ny hamafin'ny fivontosan'ny hoditra sy ny isan'ny teboka dia ho be dia be raha oharina amin'ny kilasy 1 sy 2, amin'ity dingana ity, izay heverina ho mafy kokoa. Ny fiakaran'ny hoditra toy ny pimple, mazàna feno endrika feno pus ary feno fahatezerana no ho maro kokoa, ary hita amin'ny toerana hafa koa, toy ny tratra sy ny faritra ambony aoriana.
Amin'ity dingana ity dia tokony hotsaboina ny hoditrao mba hisorohana ny fivoarany mankany amin'ny endrika henjana kokoa na kilasy faha-4, izay mazàna miadana amin'ny famaliana ny karazana fitsaboana. Miaraka amin'ny menaka lohahevitra, ny fanafody am-bava dia homena koa mba hifehezana ny fitomboany. Ireo mpitsabo mpanadidy hoditra dia hampiasaina ihany koa mba hisorohana ny fery izay mety ho tavela amin'ny famolavolana ny mony.
Amin'ity dingana ity, ho mafy ny fitsangatsanganana. Izy io dia hiseho ho toy ny kista lehibe, mijery nodular, miaraka amin'ny hamaroan'ny hoditra hita.
Miaraka amin'ireo mpitsabo lohahevitra sy am-bava, tsy maintsy harahina ihany koa ny fitsaboana maivana mba hifehezana ny fivakisan'ny mony. Na izany aza dia heverina ho endrika mony tsy dia fahita firy izy io, satria mazàna amin'ny dingana fahatelo amin'ny fivoarana dia tokony hanantona fanampiana amin'ny mpitsabo manokana ny olona.
Maninona ianao no tokony hifandray amin'ny dermatologist
Dokotera mahay hoditra - dermatologista - no seranana fiantsoana voalohany rehefa te hividy pilina mony ianao. Zava-dehibe ny fitsidihana ny dermatologista anao amin'ny famaritana ny anton'ilay olana mba hanomezana fanafody fanafody mony. Na izany aza, tokony mbola manana hevitra momba ny karazana fanafody mony atolotra anao ianao ary inona no ho vokatry ny fitsaboana sasany.
Ity tovana hoditra ity dia azo sokajiana amin'ny endrika malefaka, antonony ary henjana. Amin'ny karazana matotra toy ny mony kista dia mitaky fomba fitsaboana tsara ny manam-pahaizana momba ny hoditra. Mahalala karazana fitsaboana isan-karazany ny mpitsabo hoditra ary afaka misafidy izay fitsaboana tianao ianao. Amin'ny tranga sasany, ny dermatologist koa dia tsy mahavita manome fanafody mety amin'ny fanesorana an'io toe-javatra mahatsiravina amin'ny hoditra io. Matetika raha mpanjifa vaovao amin'ny dermatologista anao ianao ary vaovao amin'ny fitsaboana ampiharina, mety hisy ny fahasosorana amin'ny hoditra.
Fanafody mony manana famolavolana tsy manam-paharoa. Ny sasany dia noforonina niaraka tamina fanafody voajanahary sy sasany izay malemy sy mampitony ny hoditra, ny sasany koa noforonina tamina zavatra simika betsaka. Misy fanafody mony izay lafo sy mahomby amin'ny hafa nefa tsy mandeha aminao, na ny mifamadika amin'izany. Ny eritreritra lehibe dia ny vidiny tsy maninona amin'ny fisafidianana fanafody mety.
Maninona ianao no tokony manomboka amin'ny fanafody mony
Ny olona mijaly amin'ity olana amin'ny hoditra ity dia mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fampiasana fanafody mahomby. Tokony hatsahatra eo no ho eo ny henatra ny fijaliana amin'izany. Tsy tokony holavina ny olona iray satria manana an'io pimples ratsy tarehy io. Manomboha mitady fitsaboana izay mahomby ampy amin'ny fanadiovana ny tavanao sy ny vatanao ary manakana ny fahatapahana ho avy. Ajanony izao dieny tsy mbola miharatsy ny toe-pahasalamanao ankehitriny.
Mazava ho azy fa maivana kokoa ny fanafody eny ambonin'ny kaontera ary tsy misy antibiotika mony sy akora simika hafa hanalana bakteria; fa ny fanafody mony kosa dia hanome anao izay kely sisa hanesorana ireo endrika ratsy amin'ity aretina ity.
Ny sasany mahazatra amin'ny fanafody famonoana kininina dia:
Ny loharano voajanahary amin'ny asidra salicylika dia hita ao amin'ilay zavamaniry White Willow ary efa fantatra nandritra ny taonjato maro mba hanamaivanana ny fanaintainana sy ny fanaintainana ary hampihena ny tazo mihitsy aza. Ny endriny simika dia mitovy amin'ny aspirinina.
Ho fanasitranana dia mahatonga ny sela ambonin'ny hoditra hidina mora kokoa, manimba bakteria ao amin'ny mason-koditra voakenda ary hampihena ny haben'ny mason-koditra ka tsy hitrangan'ny aretina hafa. Izy io koa dia manampy amin'ny famoronana sela vaovao.
Mamporisika ny fiarovana ny hoditra amin'ny masoandro ny FDA raha mampiasa vokatra misy asidra salicylic.
Hita tamin'ny taona 1920 fa mahasalama ny mony, benzoyl peroxide dia ampiasaina ho crème na gél. Ampirisihina hampiasa fifantohana 2.5% hanombohana izany, ary hanangana tsimoramora hatramin'ny 5% sy 10% aorian'ny nahazoan'ny hoditra fotoana fandeferana.
Benzoyl Peroxide dia miasa amin'ny fanamainana sy fanadiovana ny mason'ny bakteria ary ny fanafainganana ny sela.
Ny Resorcinol dia fitambarana simika izay manana antiseptika sy otrika otrikaretina. Ampiasaina matetika ho an'ny aretin-koditra mahery vaika toy ny eczema sy psoriasis, amin'ny fatra kely 2% na latsaka ny fifantohana, ny resorcinol koa dia fanafody mahomby.
Ity ambany ity ny lisitry ny fanafody fitsaboana mony mahazatra:
Ny kilasin'ny fanafody mony antibiotika, Clindamycin dia mandaitra indrindra amin'ny otrikaretina bakteria (mitaky oxygen) ary anaerobic (tsy mila oxygen).
Rehefa ampiharina topically, dia afaka manampy amin'ny ady amin'ny mony ary mandaitra indrindra rehefa ampiasaina miaraka amin'i Benzoyl Peroxide na Adapalene (retinoid).
Ny antibiotika iray izay mitovy amin'ny penicillin, dia ampiasaina tsara ho fanosotra, crème na gel mba hitsaboana pimples.
Tetracycline koa dia endrika iray amin'ny antibiotika hiadiana amin'ny otrikaretina bakteria. Izy io dia ampiasaina hitsaboana akne ary koa rosacea. Ny voka-dratsiny dia misy ny fiovan'ny nify, ary tsy tokony ho entin'ny vehivavy bevohoka.
Tretinoin (anarana marika: Accutane) dia endrika asidra vitamina A ary fantatry ny ankamaroan'ny fanafody mony Retin A. Tretinoin koa dia mitsabo keratosis pilaris (fikolokoloana amin'ny hoditra izay toa hoditr'akoho) ary naseho fa mampiadana ny fizotry ny hoditra.
Ny voka-dratsy dia misy mangidihidy, mena ary fahatsapana mirehitra. Ilaina tokoa izany raha mampiasa Retin A hanaraka tsara ny torolalan'ny dokotera momba ny dermatolojika sy hisorohana ny masoandro. Rehefa manamaina ny hoditra i Tretinoin, dia tokony hialana koa ny famosana.
Tombontsoa sy fiatraikany amin'ny Accutane
Fantatra amin'ny ankapobeny fa ny zava-mahadomelina Accutane dia manome vokatra tsara dia tsara ho an'ireo olona tratry ny mony. Etsy ankilany, manome fiatraikany ratsy be fotsiny izany raha bevohoka ilay olona mampiasa azy. Ny Accutane dia heverina ho ny fanafody farany ary omena indrindra raha toa tsy misy mandaitra amin'ny mony. Noho izany tamin'ity tranga ity dia nianatra isika fa misy fepetra sasany izay tsy tokony mihinana fanafody ho an'ny mony ny olona satria mety hiteraka fiatraikany ratsy ary tsy mahasoa, fa ny iray kosa dia tokony hahalala an'io zava-misy io ary tsy tokony hanome tsiny tanteraka ny fanafody ary mila mahazo ny pilina ataon'izy ireo dia nankatoavin'ny mpitsabo azy ireo alohan'ny hanombohany mampiasa azy.
Fanamarihana lehibe: AZA mampiasa na mihinana na inona na inona amin'ny fanafody amin'ny endrika mahery vaika etsy ambony raha tsy manatona dokotera mahay. Ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ny fampahalalana fotsiny fa tsy tokony hoheverina ho torohevitra ara-pitsaboana.
Ny olona manana mony koa dia mijaly amin'ny fahaketrahana. Rehefa manana pimples ianao mandritra ny fotoana maha-zatovo anao dia manakana ny fiainam-piarahamoninao izany. Mety hahatonga anao hahatsapa fahatezerana izany, na dia hatrany amin'ny fankahalana aza. Fantatra fa niova ny fihetseham-po sy ny fahaketrahana. Ny fitsaboana amin'ny fanafody dia afaka manampy anao handresy ny sasany amin'ireo olana ireo. Hijery ny tarehin-javatra misy anao ny dokoteranao ary afaka manampy anao handresy ireo olanao maro. Rehefa mihinana ny zava-mahadomelina Isotretinoin ianao ary mahatsapa eritreritra hamono tena dia tokony hampahafantarinao avy hatrany ny dokoteranao. Ity zava-mahadomelina ity dia mampitombo ny fahatsapana fahaketrahana sy fironana hamono tena amin'ny olona sasany. Misy ny fisoratana anarana voatondro ankehitriny mba hitazonana ireo izay mampiasa Isotretinion hanampy amin'ny fanesorana ity toe-pahasalamana ity.
Ary koa, ny fitsaboana amin'ny laser dia mety harahina, izay hanimba ny fihomboan'ny fihary ao, izay mazàna no mahatonga ny olana aloha.
Ny mony dia tsy raisina ho olan'ny hoditra manimba ary azo avela irery raha toa ka toa tsy voakasik'izany ny olona. Ny fitsaboana ny mony tsara indrindra dia tsy ilaina raha tsy amin'ny tranga lehibe. Tsindrio eto raha hividy Roaccutane an-tserasera.